Ifulethi elinekamelo lokulala elilodwa eduze nenkaba yedolobha & Racecourse - I-Airbnb
Ifulethi elinekamelo lokulala elilodwa eduze nenkaba yedolobha & Racecourse
Siyakwamukela ku-Flat 2 - I-maisonnette yesimanje yaphansi enendawo yokupaka imoto eyodwa nomnyango wayo wangaphambili. Inendawo yokuhlala ethokomele, yesimanje, ikhishi le-galley elinakho konke, ikamelo lokulala elilala abantu ababili negumbi lokugezela elineshawa engaphezu kuka-. Yonke ifenisha intsha kuhlanganise nomatilasi ophindwe kabili. Kunendawo ye-patio evikelwe engemuva ebamba ilanga lantambama nelokuhlwa. Kuhlanganisiwe yi-broadband WiFi yamahhala, i-smart tv, i-friji freezer, umshini wokuwasha kanye nokushisisa phansi okuntofontofo.
Konke ongakudinga ekuhlaleni kwesikhathi esifushane noma eside kungatholakala, kusuka ezintweni zokupheka, itiye, ikhofi, ushukela, ubisi, amanzi, amabhisikidi okwamukela. Umshini wokomisa izinwele, i-ayina nebhodi, i-airer, i-DVD player enezinhlobo zama-dvds, izinto zokugeza ezinethezekile njll. nazo ziyatholakala.
Iyisicaba endaweni yokuhlala ethulile eseduze nesitimela futhi iphakathi nebanga elilula lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Newbury Racecourse, enkabeni yedolobha, iziteshi zesitimela nezamabhasi, i-Sainsburys enkulu, i-Victoria Park, i-Kennet ne-Avon Canal ne-Greenham Common. Kulabo abalapha ngomsebenzi, kuwuhambo lwezinyawo olufushane oluya emzileni webhasi le-Vodafone HQ kanye nendawo yezimboni yase-Hambridge Road. Izindawo ezithandwayo zendawo zihlanganisa i-Highclere Castle (Downton Abbey), i-Waterership Down, i-Newbury Racecourse, i-Donnington Castle, i-Snelsmore Common, i-Greenham Common. I-Hungerford nezitolo zayo zezinto zakudala kanye nemigwaqo ingaphansi nje komgwaqo, futhi i-Winchester, i-Oxford, i-Reasing ne-Southampton zikufinyeleleka kalula.
Siphila ngokoqobo imayela elilodwa ukuze uma udinga noma yini vele usho! Sobabili singabantu bendawo ngakho singakunikeza ukusikisela okuningi kwezinto ongazenza nokuzibona.